Izindlela Eziyisihluthulelo Ezi-7 ze-SEO Okufanele Uzisebenzise ngo-2016 | Martech Zone
Eminyakeni embalwa eyedlule, ngabhala lokho I-SEO ibifile. Isihloko besiphezudlwana ngaphezulu, kepha ngimi ngokuqukethwe. I-Google ibibamba ngokushesha imboni ebiyizinjini zokusesha nokudlala futhi okuholele ekutheni ikhwalithi yezinjini zokusesha yehle kakhulu. Bakhiphe uchungechunge lwama-algorithms angenzanga nje kube nzima ukusebenzisa amazinga okusesha, baze bangcwaba labo ababathola benza i-blackhat SEO.
Lokho akusho ukuthi isayithi akufanele lenzelwe ukuseshwa okuphilayo. Yilokho nje ukuthi ochwepheshe be-SEO ababekhawulele ubuchwepheshe babo ekuxhumaniseni i-backlinking nasezingeni bazithola sebengasebenzi. Sesha ochwepheshe abathanda i-ejensi yethu wabikezela izinguquko futhi waxwayisa amaklayenti ethu ngokukhwabanisa, futhi manje amafemu ethu enza kahle kakhulu. Kepha indlela yethu yokwenza iziteshi eziningi futhi ayigxilile ekusesheni uqobo. Siyabona ukuthi i-ecosystem yama-digital mediums asekelana kanjani.
Sezadlula izinsuku lapho i-SEO ibisalokhu igxile kumagama angukhiye nje, ama-backlink kanye nokukleliswa kwekhasi 1. Izinjini zokusesha ziya ngokuya zihlakaniphile, yingakho umholi wemboni uDavid Amerland ekubeka, futhi baya ngokuqonda kangcono inhloso yomsebenzisi nokuthi banganikeza kanjani okunenjongo. Noma kunjalo, ukufaka nje isayithi lakho ngama-athikili nemidwebo emihle ngeke kukusike ngaphandle kokuthi ufunde kabanzi ngalawa masu futhi ube ngcono ku-SEO yango-2016. UJomer Gregorio, iDigital Marketing ePhilippines
Uma ungumakethi wedijithali futhi ufuna ukuba ngcono ku-SEO, le infographic evela kuJomer ishaya kuzo zonke izinto ezisemqoka ekusetshenzisweni kwenjini yanamuhla yokusesha. Nawa amasu ayisikhombisa we-7 SEO:
Qonda Izici Zokubeka Okubaluleke Kakhulu Nokubaluleke Kakhulu zango-2016 - Ngokuvumelana ne I-Moz, ubungani beselula, inani elibonwayo, idatha yokusebenzisa, ukufundeka, nokuklama ngaphezulu kohlu. Izixhumanisi ezikhokhelwayo nombhalo wehange wehle ngomthelela (futhi izixhumanisi ezikhokhelwayo zingenza nomonakalo womkhiqizo wakho).
Lungiselela usesho lweselula - Ukusesha kweselula kukhuphuke ngama-43% YoY, ngama-70% osesho lweselula aholela esenzweni kungakapheli ihora ..
Gxila ekuhlosweni komsebenzisi - Esikhundleni samagama asemqoka, cabanga ngamagama angukhiye afanele omsila omude nezihloko zizonke. Izinjini zokusesha ziguquke ukuze ziqonde izinhloso zomsebenzisi, ngakho-ke ungabhala okuqukethwe okungokwemvelo okubandakanya amathemba nabafundi.
Ukuya endaweni kuseseyindlela enhle ongayihamba - Ingxenye yazo zonke izivakashi eziku-inthanethi iya ukuvakashela isitolo phakathi nosuku. Qiniseka ukuthi ubhalwe kahle ku-Bing, Google, naku-Yahoo! usesho lwebhizinisi olunemiyalezo engaguquguquki kuyo yonke.
Isikhathi Eside Kungcono - Yeka ukukhiqiza ulayini wokukhiqiza ongapheli wokuqukethwe okuhlala kuluhlaza futhi utshale imali kokuqukethwe kukaNdunankulu, kwezemfundo nakwezokusizakala okuningi okunikezela ngemininingwane engcono kakhulu ku-inthanethi ngezihloko ezithile.
Ukuphepha Kwesiza ne-SEO - Ukuhambisa isayithi lakho ekuxhumaneni okuphephile (njengoba senzile), kungakunikeza onqenqemeni olufunayo ngaphezu kwabancintisana nabo. Ukuhamba okuqinile uma uqoqa noma yiluphi uhlobo lwedatha noma kunjalo.
Yenza okuqukethwe kwakho kusesheke ngezwi - I-Apple Siri, i-Google Now neMicrosoft Cortana konke kuyizinsizakusebenza ezibonakalayo ngesici esisodwa okuyikhono lokusesha nokuthola imininingwane ku-inthanethi. Ngokuhambisana nokuqukethwe okude, izindatshana eziphelele zingakunikeza ithuba elingaphezulu kusesho lwezwi kunokuqukethwe okuhlala kuluhlaza okungaphansi kwekhwalithi.
Nayi i-2016 SEO Strategy Infographic
Tags: 2016ama-backlinksubude bokuqukethweama-digital marketing philippinesihluzohttpsizici ezibalulekile zesikhundlajomer gregorioukugxila igama elingukhiyeAmagama angukhiyeseo sendawousesho lweselulaukwenziwa kosesho lweselulaIzinga lezingarankingsukusebenzisa ngokugcwele injiniseoama-algorithmslokho kufileIzici zesikhundla se-seoamazinga we-seosslintando yomsebenzisiukusesha ngezwi